Sida loo sameeyo dulmar talaabo talaabo ah oo wax looga barto | Sameynta iyo daraasadaha
Sida loo sameeyo dulmar
Maite Nicuesa | | Farsamooyinka daraasadda
Waxaa jira farsamooyin waxbarasho oo badan oo aan isticmaali karno. Waa muhiim inuu ardaygu ka qayb qaato samaynta jaangooyo wanaagsan. Haddii kale, ardayga aan dhiirrigelinta ahayn kama faa'iideysto waqtiga inta lagu jiro fulinta qorshaha.
Waxaad u baahan tahay inaad ogaato maxaa qorshe ah iyo sida loo sameeyo in loo adeegsado farsamadan daraasadda. Intaas waxaa sii dheer, sidoo kale waxaa muhiim ah in la helo meel ku habboon oo fiiro gaar ah loo yeesho iyo inaad awood u yeelatid inaad bixisid dhammaan dareenka lagama maarmaanka u ah mawduuca.
1 Sida loo sameeyo dulmar?
1.2 In Word ama kombiyuutarkaaga
2 Sida loo sameeyo tilmaamo qurxoon ama hal -abuur leh
3 Waa maxay qorshe
4 Noocyada qorshaha
4.3 Jaan-goyn ama qorshe toosan
4.4 Nidaamka tiirarka
4.5 Nidaamka xarfaha
4.6 Nidaamka tirada
4.7 Isku dhafan: xarfaha iyo lambarrada
5 Maxaa loo sameeyaa istiraatiijiyad
6 Amarka daraasadda si loo sameeyo jaantus
6.1 Amarka daraasadda si loo sameeyo jaantus wuxuu noqon doonaa sidan soo socota:
7 Tayada iyo tirada daraasadda
Sida loo sameeyo dulmar?
Aad ayey muhiim u tahay inaad haysatid qoraallo kama dambeys ah oo naga caawiya inaan dib u eegno maalmo ka hor imtixaanka. Qalabkan dib u eegistu marwalba waa lagama maarmaan, laakiin xitaa wuu ka sii badan yahay markay waxyaabaha ku jira ballaadhan yihiin. Sidan oo kale, waxaan ku xusuusan karnaa waxa lagama maarmaanka ah.
Schemas, oo kaabaya soo koobid dhaqameedyada, ayaa naga caawinaya inaan xasuusano macluumaadka. Ardaygu wuxuu u adeegsadaa inay dib u eegaan kahor taariikhda imtixaanka soo socda. Qalabkani wuxuu u adeegaa hawl wax ku ool ah.
Sidee ayuu u noqon karaa sida loo sameeyo dulmar? Kuwani waa qaar ka mid ah tilmaamaha aad ku dhaqmi karto:
Sidii aan hore uga faallaynay, waa inaad dhowr jeer akhrido qoraalada oo aad hoosta ka xariiqdo. Waxa kale oo lagugula talinayaa inaad ku qorto farqiga udhaxeeya.
Xullo cinwaan guud oo qeexaya mawduucaaga guud.
Aqoonso qaybaha ugu muhiimsan ee mawduuca si aad ugu horumariso macluumaadka si nidaamsan.
Soo koobi oo soo koobi nuxurka qayb kasta. Haddii aad u baahato, isticmaal soo gaabi waxoogaa ah si aad uga fa'iideysato booska folio-ka xitaa ka sii fiican.
Isku xir fikradaha kala duwan si aad u abuurto mawduuc guud oo u dhexeeya fikradaha waaweyn iyo xogta labaad.
Haddii aad rabto, waxaad sidoo kale isticmaali kartaa midabyo badan si loo kala saaro mowduucyada. Sidan oo kale, kala duwanaanshahani wuxuu kaa caawinayaa inaad aqoonsato waxyaabaha gaarka ah.
Markaad dhammaystirto hawshan, dib u eeg dulmar si aad wax u saxdid. U adeegso qalabkan waxbarasho inaad dib u eegto. Aad ayey muhiim u tahay in waqtiga waxbarashadu uu noqdo mid tayo leh. Jaantusyadu waxay kaa caawinayaan inaad sida ugu fiican uga faa'iideysato daqiiqadaha aad geliso yoolka tacliimeed ee ka sii wanaagsan.
Tabaha ugu fiican ee wax lagu barto
In Word ama kombiyuutarkaaga
Waxaad isticmaali kartaa kheyraadka kala duwan si aad u abuurto dulmar wanaagsan. Isticmaalka qalin iyo warqad ayaa kuu oggolaanaysa inaad tan meel walba ku samayso. Laakiin waxaa laga yaabaa inaad doorbiddo inaad hormariso waxa ku jira kombiyuutarka. Xaaladdaas, waxaad isticmaali kartaa Ereyga. Sida loo bilaabo hawshan? Guji si toos ah menu View, oo arag ikhtiyaarrada ay isku darayso. Qeybtaan waxaad ka heli doontaa qeybta Qorshaha. Markaad gujiso, waxaad awoodi doontaa inaad aragto qoraalka dukumintiga leh qaab -dhismeedkan.
Qaabka muuqaalka ah ee jaantuska sidan loo soo saaray kama koobna isku xigxiga furayaasha ama fallaadhaha. Xidhiidhka ka dhexeeya fikradaha waaweyn iyo kan labaad ayaa isla markiiba lagu gartaa iyada oo la adeegsanayo urur heerar kala duwan leh. Markaad gujiso qaybta View iyo qaybta dulucda ee Ereyga, aaladda qalabku waxay soo bandhigaysaa ilo kala duwan si ay u qaabeeyaan layliga. Qaab dhismeedka waxa ku wareegsan heerar kala duwan oo cinwaanno ah.
Qorshe wanaagsan wuxuu u taagan yahay ururkiisa muuqaalka ee kaamilka ah. Wuxuu u soo bandhigayaa hab dardaaran ah qodobbada ugu waaweyn ee qoto dheer mawduuca ugu muhiimsan. Waxaan ka faalloonnay in naqshad lagu sameeyay Word ay muujineyso qoraal loo habeeyay heerar kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, barnaamijku wuxuu sidoo kale suurtogal ka dhigayaa in la dhexgeliyo calaamado gaar ah oo ka socda jaantuska warqadda oo la qoro. Waayo, Samee dukumenti cusub, guji Insert menu oo hubi xulashooyinka laga heli karo qaybta Qaababka.
Adigoo gujinaya meeshan waxaad ku arki kartaa noocyo badan oo naqshado fallaadho ah, jaantusyada socodka, khadadka iyo qaababka kale ee aasaasiga ah. Sidan, waxaad ku habayn kartaa nidaamka calaamado kala duwan oo kaa caawinaya inaad habayso macluumaadka. Ka waran haddii cabirka furaha ama calaamad kale oo aad dooratay ay ku qaadato meel aad u badan dukumintiga? Waxaad hagaajin kartaa muuqaalkaan si aad u siiso qaabka saxda ah.
Sida loo sameeyo tilmaamo qurxoon ama hal -abuur leh
Tababbarka iyo Daraasadaha waxaan ku siinaynaa xoogaa soo jeedin iyo talooyin si aad u gaarto hadafka:
Marka hore, mudnaan sii waxa run ahaantii muhiim ah: nuxurka. Quruxda qaab -dhismeedku si weyn bay u hagaagtaa marka macluumaadka si fiican loo habeeyo. Taasi waa, waa cawaaqib toos ah oo ah diyaarinta hore oo aad u wanaagsan. Maaddaama, marka ay sidaas tahay, waxaa jira amar muuqaal ah oo isku xira qodobbada ugu waaweyn. Si kor loogu qaado hal -abuurka inta lagu jiro layliga, waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho qaar ka mid ah qabyadayaasha ka hor intaadan qeexin faahfaahinta dulucda u dambaysa. Sidan, waxaad fursad u leedahay inaad saxdo, qiimeyso beddelka, isbarbar dhigto naqshado kala duwan, aqoonsato qaar ka mid ah hagaajinta iyo turxaan -bixinta dukumintiga iyada oo taxaddar la siinayo. Khibrad la taaban karo ayaa lagama maarmaan u ah abuurista qorshayaal asal ah oo qurux badan.
Ku sawir sawirrada ereyada muhiimka ah si aad ula socoto fikradda sawir muuqaal leh. Badanaa ujeeddada koowaad ee dhammaystirka dulucda ayaa ah in loo adeegsado aalad waxbarasho si dib loogu eego nuxurka imtixaanka. Isku -darka aadka u wanaagsan ee qoraalka iyo sawirka ayaa ku habboon hagaajinta xusuusta muuqaalka iyo fahamka macluumaadka. Ma aha samaynta sawirro badan oo dhammaystiraya qorshaha, laakiin ku saabsan adeegsiga hal -abuurkaan si ulakac ah si loo xoojiyo dhinacyada soo bandhigaya dhib aad u sarreeya. Waa maxay hadafka sawirku? Caddee macluumaadka.
Xulashada farta -qoraalka waa mid kale oo ka mid ah dhinacyada ay tahay inaad ku qeexdo xaqiijinta nidaamka kombiyuutarka. Font -ka la soo xulay waa in uu muuqaal ahaan qurxiyaa qoraalka laakiin, in kasta oo ay bilicsanaantu khuseyso, farta -qoraalka ma aha qodobka ugu muhiimsan ee dulucda. Waxa run ahaantii lama huraanka ah waa waxa ku jira iyo waxa ay muujinayaan. Waa in maskaxda lagu hayaa si hal -abuurku uu si fiican ula jaanqaado ujeeddada ugu weyn: si loo fududeeyo fahamka iyo fahamka maadada la falanqeeyay. Tusaale ahaan, adeegsiga xarfaha kala duwan ee dulmarku waxay abuuri karaan dareen fowdo iyo buuq muuqaal leh.
Isticmaal midabyo kala duwan si aad u abuurto qorshe quruxsan. Raadi iswaafajinta u dhaxaysa codadka la doortay. Oo, markeeda, dooro midabo ka soo horjeeda asalka. Haddii aysan jirin kala soociddan cad ee u dhaxaysa codka laftiisa iyo asalka uu ka kooban yahay, waxaa sii adkaanaysa akhriska.
Soo gaabinta Nashqad wanaagsan ayaa maamusha in si habsami leh loogu soo ururiyo nuxurka qoraalka buuxa meel yar. Si tan loo sameeyo, waxay ku habboon tahay in la garto kuwaas oo ah ereyada furaha ah ee ku soo noqnoqda qoraalka oo lagu daro farsamadda daraasadda ee la sheegay. Dib u akhri warka oo dhammaystiran oo tirtir erayadaas ama weedhaha aan ku darin qiime dhab ah. Wax kasta oo kaa soo hadhay iska qaad. Bilicda bilicda ayaa soo hagaagaysa marka ay jirto caddayn weyn.
Ku habbee qaabka dulucda aragtidaada. Markaad samaysato qoraalo adiga kuu gaar ah, aad soo koobto ama aad samayso dulmar, waxaad ku biirtaa mawduuca daraasadda. Sababtaas awgeed, waxaa aad loogu talinayaa in, in kasta oo aad dib u eegi karto nuxurka ka yimid qorshaha saaxiib kale, aad ku lug yeelato faahfaahinta faahfaahintaada. Ku habbee nidaamka font, qaab, midabyo ama calaamado aad ugu jeceshahay. Isticmaal maaddooyinkaas oo kaa caawinaya inaad kordhiso fahamkaaga waxa la baray iyadoo ay ugu wacan tahay soo bandhigid taxaddar leh.
Ka raadi dhiirrigelinta qorshayaasha kale taas oo tusaale u noqon karta.
Marka la soo koobo, waxay raadineysaa dheelitirka u dhexeeya foomka iyo nuxurka si loo abuuro qorshe leh bilicsanaan taxaddar leh.
Waa maxay qorshe
Qorshe waa qalab laxiriira fikradaha kaladuwan ee kuxiran dunta guud. Waxay bixisaa matalaad muuqaal ah oo maaddo ah, oo qaabkan u qaabeysan, si dhammaystiran loo abaabulay. Isku-xidhka ayaa fure u ah farsamadan daraasaddan oo si ballaaran looga adeegsado dugsiga, machadka, jaamacadda iyo marka loo diyaargaroobayo imtixaannada dadweynaha. Tan iyo markii, tani waa mid ka mid ah aagagga arjiga ee aaladan ay leedahay.
Qorshe sidoo kale waxay noqon kartaa hage inaad raacdo waxyaabaha ku riixa qorshe hawleedka. Tusaale ahaan, ganacsaduhu wuxuu adeegsan karaa tixraac loo dejiyay qaab xeeladeysan si uu u sameeyo qorshe ganacsi.
Markuu ardaygu u adeegsado shaxanka heer tacliimeed, waxay la xiriiraan qalabkan mowduuca matalaaddiisu ay tilmaamayso. Marka, markii la aasaasayo xiriiriyahan, waa suurtagal in la isku daro fikradaha ugu waaweyn falanqaynta this. Si loo sameeyo dulmar wanaagsan, hore, waxaa lagama maarmaan ah in si taxaddar leh loo akhriyo nuxurka la soo koobayo si loo falanqeeyo, loo muujiyo loona yeesho aragti guud.
Xulo nooca dulmar ee kaa caawinaya inaad sifiican dib ugufiiriso. Taasi waa, dhammaan qaababka la heli karo, waxaa laga yaabaa inaad doorbidid aad u weyn ka haysato midkood.
Kani waa iskuxirka loo doortay muuji isku xidhka dhibcaha taasi waa qeyb ka mid ah bandhigan si qorsheysan loogu sharaxay. Xaaladdan oo kale, hal fikrad ayaa ku xirmaysa mid kale iyada oo loo marayo fallaadh u adeegta isku xira. Mid ka mid ah faa'iidooyinka qaabkani waa inay tahay mid aad u fudud isla markaana, isla markaa, si fiican u caddaynaya macluumaadka.
Mawduucyada waaweyn waxaa lagu xoojiyay doodda fikradaha labaad. Adeegsiga fallaadhaha ayaa kuu oggolaanaya inaad ku horumariso fikradda bilowga ah xog cusub oo si dhammaystiran isugu xidhan. Inta dib u eegistu socoto, waxaad si fudud u indha indheyn kartaa mowqifka fikrad kasta ay ku jirto shaxanka iyo waxa ku xirnaa macnaha guud Kaliya waa inaad raacdaa jihada fallaarta si aad uga jawaabto wixii su'aalo ah ee ku saabsan.
Miyaad doorbideysaa inaad adeegsato qaab ka duwan midka koowaad ee kor lagu sharaxay? Asal ahaan, nidaamka furaha ayaa aad ugu eg kii hore. Si kastaba ha noqotee, waxaad isticmaashaa ilo kala duwan si aad u soo bandhigto xiriirka ka dhexeeya fikradaha kala duwan. Xaaladdan oo kale, xargaha ayaa qayb ka ah matalaadda muuqaalka ah. In kasta oo qorshaha noocan ahi ka mid yahay kuwa ugu cad cad, haddana ma dhici karto haddii waxyaabaha la soo koobayaa ay aad u ballaadhan yihiin. Wakiilku wuxuu helayaa kakanaanta weyn markay soo bandhigto tiro aad u tiro badan oo qaybaha kala duwan ah.
Jaan-goyn ama qorshe toosan
Jaantus waxaad ku arki kartaa culeysyo kala duwan oo ka imanaya fikradda bilowga ah. Laakiin nooca matalaadda ayaa sidoo kale lagu kala duwanaan karaa habka xogta loo qaabeeyey. Ku qorida fikradaha si qumman ama toosan waa xulashooyinka ugu isticmaalka badan. Tani waxay saameyn ku yeelaneysaa khibradda akhriska. Waxay kuxirantahay nooca qorshaha, aqrinta waxaa laga sameeyaa bogga kore korkiisa ama, dhanka kale, bidix ilaa midig.
Dulucdu waa aalad daraasad, sidaa darteed, tani waa aalad leh ujeedo wax ku ool ah. Way ku habboon tahay in la doorto qaab fudud oo diiradda la saaro waxa muhiimka ah: fahamka mawduuca. Hagaag, qorshaha noocan ah waa midka koobaya xogta hareeraha dhowr tiirar oo sifiican loo kala duwanaan karo. Mid kasta oo ka mid ahi wuxuu ururiyaa fikradaha ku xeeran dun guud oo gaar ah. Laakiin, markeeda, tiirar kasta wuxuu la xiriiraa kuwa kale.
Nidaamkan noocan ah, halkii aad ka isticmaali lahayd furayaasha ama fallaaraha isku xira fikradaha kala duwan, wuxuu adeegsadaa xarfaha alifbeetada. Xarfaha waaweyn waxaa loo adeegsadaa in lagu muujiyo fikradaha waaweyn. Taa bedelkeeda, wax yar ayaa soo bandhigaya xogta labaad.
Dhammaan qorshooyinka la magacaabay ilaa hadda waxay leeyihiin astaamo u gaar ah, laakiin asal ahaan waa isku mid. Ujeedada wakiilkani waa in si cad loo soo bandhigo macluumaadka. Hagaag, waxaa jira siyaabo kala duwan oo loo abaabulo xogtaas: lambarradu waxay kuu oggolaanayaan inaad uruuriso ereyo kala duwan, dejiso qaybo-hoosaadyo iyo qaab-dhismeed kasta. Tirinta noocan ah waa mid aad u fudud.
Isku dhafan: xarfaha iyo lambarrada
Kani waa nooc ka mid ah qorsheyaasha aan adeegsan hal nooc oo ka mid ah maaddooyinka, laakiin isu geynta labada kor lagu sharaxay: lambarrada iyo xarfaha alifbeetada. In kasta oo aad ka qaadan karto dhiirrigelinta tusaalooyinkii hore loo soo sharraxay si aad u horumariso dulmar wanaagsan oo qaab ah oo keliya adeegsanaya hal nooc oo calaamado ah, sidoo kale waxaad muuqaal ahaan ku kobcin kartaa layligan wadarta laba maado sida kuwan oo kale, maxaa yeelay xarfaha iyo lambarradu way is dhammaystiraan.
Fikradaha ku jira dulmar ayaa si isku xigxig ah loo soo bandhigi karaa. Laakiin sidoo kale waxaa jira qorsheyaal ka tarjumaya heer kala-sarrayn u dhexeeya fikradaha. Sidan oo kale, hal macluumaad ayaa ka habboon kan kale. Tanina waxay ka muuqataa habka abaabulka macluumaadka.
Sida ay u wanaagsan tahay inaad wax ka barato oo aad dib u eegto mawduuca imtixaanka soo socda ee ka imanaya qoraalladaada, ayaa sidoo kale lagugula talinayaa inaad samaysato jaantusyo kuu gaar ah. Waayo, Xulo qaab waxtar kuu leh oo kuu cad.
Maxaa loo sameeyaa istiraatiijiyad
Dadka qaarkiis waxay u arkaan layliskan mid caajis ah, laakiin waxaa aad muhiim u ah inaan laga boodin tallaabadan. Nidaamku wuxuu kaa caawinayaa inaad abaabusho macluumaadka oo aad nidaamiso. Intaa waxaa dheer, qaab-dhismeedkan la amrey wuxuu fududeeyaa fahamka waxyaabaha la falanqeeyay. Dhammaan xogta, si dhammaystiran isugu xiran, waxay macno u sameynayaan macnaha guud ee qorshe wanaagsan.
Qalabkani wuu ku caawinayaa si habsami leh wax u barta. Adoo raacaya talaabo kasta, waxaad baran doontaa fikradaha marka hore.
Amarka daraasadda si loo sameeyo jaantus
In la sameeyo daraasad wanaagsan waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la ogaado amar meesha qorshuhu ku yeelanayo kaalinta shanaad. Marka dulmar la gaaro, nuxurka daraasadda waa in si fiican loo fahmaa. Sidan oo kale, dulmar wanaagsan ayaa la samayn karaa kaas oo bixin kara fikradaha waaweyn ee la muujiyo iyo sidoo kale in si fiican loo amro in si fiican loo xasuusto fikradaha.
Amarka daraasadda si loo sameeyo jaantus wuxuu noqon doonaa sidan soo socota:
Akhrin deg deg ah. Marka hore, ku samee eegis deg deg ah qoraalka daraasadda si aad u ogaato waxa mowduuca ugu muhiimsan yahay. Sidan oo kale, waxaad kuheleysaa xiriirkii ugu horreeyay ee sheyga daraasadda.
Qaybi nuxurka qaybaha si diirada loogu saaro qaybaha ka kooban mawduuca.
Akhrinta iyo fahamka qoraalka. Marxaladdan, u akhri qoraalka si taxaddar leh si aad u fahanto farriinta. Ku qor fikradahaas kuwa aadka kuugu adag inaad ku eegto macnahooda qaamuuska. Sidan ayaad u fahmi kartaa qoraalka oo dhan si cad.
Hoosta ka xarriiqo fikradaha ugu waaweyn. Hoos ka xariiqiddu waa lama huraan intaan la samayn shaxanka. Khad hoosaadka ayaa kaa caawinaya inaad doorato fikradaha ugu muhiimsan oo aad iska tuuri karto kuwa aan annaga nala khusayn. Mahadsanid inaad hoosta ka xariiqdo, waxaad si fiican u abaabuli kartaa waxyaabaha aad u baahan tahay inaad barato.
Qorshaha. Qorshuhu waa mid lama huraan u ah in lagu guuleysto daraasad guuleysata. Marxaladdan, abaabul fikradaha waaweyn ee aad hoosta ka xariiqday qoraalka. Sidan oo kale, waxaad iyaga siin kartaa amar ay ku indha indheeyaan oo ay ku fahmaan waxa ku jira.
Shaxdu waxay dhameystireysaa macluumaadka qoraalka ku jira. Ku dar ereybixin iyo caddayn. U adeegso qalabkan si aad ugu dhex gasho fikradaha ugu murugsan.
Dib u eegista. U isticmaal macluumaadkan inaad dib u eegto waxa ku jira imtixaanka soo socda.
Sidan oo kale, inta lagu guda jiro daraasaddan, waxaad sidoo kale awoodi doontaa inaad hubiso dhinacyada aad u baahan tahay inaad xoojiso xitaa inbadan.
Tayada iyo tirada daraasadda
Dadka wax ku baranaya heer kasta oo tacliimeed waa inay mudnaanta siiyaan tayada waqtiga waxbarashada. Magac ahaan, waxaa fiican in waqti yar la barto in saacadaha la joogo buugga hortiisa, laakiin iyada oo aan si dhab ah looga faa'iideysan booskan ku meelgaarka ah. Maareynta waqtiga waa in la hagaajiyaa si loo gaaro ujeeddooyinka la doonayo.
Sidaa darteed, dhiirigelintu waa lama huraan si loo barto loona sameeyo jaantusyo. Diirada saar hadafkaaga ugu weyn si aad ula timaado shax cad oo nidaamsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Sameynta iyo daraasadaha » Daraasado » Farsamooyinka daraasadda » Sida loo sameeyo dulmar
Jawaab aad ufiican oo kusaabsan su'aal dhib badan, waa hagaag dhamaanteed waxay ka koobantahay, soo koobid wanaagsan iyo macnaha guud ee ay xambaarsan tahay, si toos ah usii hay, ha siinin markiisa su'aal aad u fudud, vemoj iyo farxad la'aan !! !
PALOMA BELEN EYEBROWS dijo
Waxaan jeclaan lahaa INTARNETKA SI AAD U XULATO XULASHADA BADAN
Jawaab PALOMA BELEN CEJAS
Way fiicnaan laheyd in sharaxaad dheeraad ah laga bixiyo mowduucaas
Waxaan rabaa inaad tusaalooyin badan ka dhigto jaantusyada, sida loo sameeyo.
Ku jawaab 83l3n
MJ jilayaasha dijo
Mahadsanid, laakiin waxaan jeclaan lahaa macluumaad dheeri ah, wali shaki ayaa jira…. !!!!
Jawaab MJ C dhadhan
Waxaan jeclaan lahaa inay macluumaad dheeri ah ka saaraan mowduucaas, markaa waa la fahmi karaa .ok.
Waxaan ula jeedaa, maxaa ka qaldan iyaga! kuwaas oo doonaya inaan bixiyo macluumaad aad u badan, wali shaki badan ayaa ka jira arrintan. okay
Jawaab yajaira guadalupe
Deggenaanshaha jaamacadda dijo
Qodobka uu nala wadaagayo ee ku saabsan sida loo sameeyo ama loo abuuro qorshe naga caawiya inaan wax barano ama si fiican u fiirsano waa mid aad u wanaagsan, waxa ugu weyn waa anshax marka la sameynayo qorshaha maxaa yeelay waxtar ma leh in la yeesho qorshe wanaagsan haddii aanan ku dhaqmin. oo u raac erey ahaan
Ka jawaab hoolka hoyga
Aniga iima muuqato sida loo horumariyo way adag tahay iyadoo ujeedkeedu badan yahay in wax yar la helo
eey kulul dijo
Way fiicnayd wey
Cabsidaada lugaha leh dijo
Waxaan jeclahay nepe cayriin
Uga jawaab cabsidaada lugaha
Maxaad u baahan tahay inaad baratid si aad u noqoto dhakhtar -jimicsi?
Waa maxay kaarka xulashada?